ရန်ကုန်တိုင်း၊ ကြည့်မြင့်တိုင်မြို့နယ်တွင် လူထု ပျောက်ကြား သပိတ်စစ်ကြောင်းကို ကားဖြင့်တိုက်ပြီး ပစ်ခတ် ဖြိုခွင်းခံရ – PVTV Myanmar
ရန်ကုန်တိုင်း၊ ကြည်မြင့်တိုင်မြို့နယ်၊ ပန်းပင်ကြီးလမ်း မှာ ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်​နေ့ယနေ့ နံနက် ၈ နာရီခွဲ အချိန် စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေး ရန်ကုန်လူထုသပိတ်စစ်ကြောင်းကို စစ်တပ်က ကားနဲ့ ဝင်တိုက်၊ သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ် ဖမ်းဆီးသဖြင့် ဆန္ဒပြ ပြည်သူတချို့ ထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိနိုင်ကြောင်း၊ သတင်းထောက်တစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိထားကြောင်း ဆန္ဒပြ သပိတ်အဖွဲ့တွေထံက သိရပါတယ်။
လတ်တလော သိရတဲ့ အချက်အလက်တွေအရ ဆန္ဒပြသူ ၁၀ ဦးထက်မနည်း အဖမ်းခံရပြီး ကားဖြင့်တိုက်ခြင်း၊ သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်းကြောင့် သေဆုံးသူရှိနိုင်ကြောင်း သိရပါတယ်။
လက်ရှိတွင် သပိတ်စစ်ကြောင်းအနီးဝန်းကျင်ရပ်ကွက်ကို ပိတ်ထားပြီး ရှာဖွေစစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်နေတယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။
ဓါတ်ပုံ – ယမန်နေ့က သပိတ်စစ်ကြောင်းပုံ
ပိတ်ထားတဲ့ရေချောင်းကို ပြန်မဖွင့်ပေးရင် ကျေးရွာတွေပျက် စီးဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်လို့ စစ်ကောင်စီရဲ့ ကွီလုံတိုင်တပ်စခန်းက KNU အဖွဲ့ဝင်တွေဆီ ခြိမ်းခြောက်စာပို့
2021-12-05 at 9:31 AM
2021-12-05 at 9:36 AM
2021-12-05 at 9:41 AM
Chit MgMg says:
Min Min Htun says:
2021-12-05 at 10:04 AM
ခွေးနဲ့တောင်မနှိုင်းသင့်တော့ဘူး ရုတ်မာပတ်စက်နေတာ ခွေးထက်နိမ့်ပါးတဲ့အဆင့် မအလကောင်းစားရေးအတွက် အလောက်တောင် ရက်စက်ကြရတာလား
2021-12-05 at 10:08 AM
လက်နက်မပါတဲ့သူကို ကားနဲ့တိုက် သေနတ်နဲ့ပစ် သိပ်သတ္တိကောင်းတဲ့ကောင်တွေ မအလကျွန်ပီသပါပေတယ်
2021-12-05 at 10:10 AM
ဘေးကင်ပါစေ အပစ်တွေ စုထားတယ်နော် မအလ
Cho Zin Lay says:
2021-12-05 at 10:11 AM
တိရစ္ဆာန်တွေမှမဟုတ်တာ လူတွေလေ တိရစ္ဆာန်ကြောင် ခွေးတွေကိုတောင် တိုက်ဖို့ အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ရှားကြသေးတာပဲ ခုဟာက ရိုင်းချက် အောက်တန်းအဆင့်အနိမ့်ဆုံး ယုတ်မာချက်
Khant Nadi says:
2021-12-05 at 10:22 AM
စာဖတ်ဝါသနာပါသူတွေ ဒီ channel ကို join ထားပါ
2021-12-05 at 10:49 AM
သွားကြားထိုးတံတစ်ချောင်းတောင်မပါတဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေတဲ့လူငယ်တွေကိုအခုလို
ကားနဲ့တိုက် သေနတ်နဲ့ပစ်ဖမ်းရလောက်အောင်လိုအပ်လို့လား လူနဲ့ပဲဝင်
ဖမ်းရင်တောင် ပြန်မခုခံတဲ့လူငယ်တွေကို အခုလို
2021-12-05 at 10:50 AM
မြို့ပေါ်သပိတ်တွေ မလုပ်သင့်တော့ဘူးဆိုတဲ့ ကရုဏာဒေါသနဲ့ ပြောကြတဲ့ စကားတွေဟာ မှန်သင့်သလောက် မှန်တယ်။ ဒီနေ့လို ရက်ရက်စက်စက် ဖြိုခွဲသတ်ဖြတ်မှုမျိုးတွေကြောင့် လက်နက်မဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေဟာ အန္တရာယ်များလွန်းလှတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီလူငယ်တွေဟာ ဒီအန္တရာယ်တွေကို မသိလို့ ဆန္ဒပြနေတာ မဟုတ်ဘူး။ အသက်အပိုပါလို့ ဆန္ဒပြနေတာ မဟုတ်ဘူး။ ပါဝါရိမ်းဂျားတွေမို့ ရဲရင့်ပြနေတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီအန္တရာယ်တွေကို သိလျက်နဲ့ မြို့ပေါ်လူထုကို သွေးမအေးဖို့ လှုံ့ဆော်ရင်းပေးနေကြတာ။
သွေးအေးနေကြပြီလား။ သူတို့ရဲ့ အသက်တွေကို အားနာပေးကြပါ။ Boycott List ထဲက အရာတွေကို အလွယ်တကူ ပြန်သုံးချင်နေပြီလား။ သူတို့ကို အားနာပေးကြပါ။ Social Punishments ဆိုတဲ့ ဖယ်ကြဉ်တာလောက်ကို လုပ်ရမှာ အားနာနေပြီလား။ သူတို့တွေကို အားနာပေးကြပါ။ တော်လှန်ရေးကို သွေးအေးပြီး နေ့စဉ်ဘဝထဲမှာ အရင်လို စီးမျောချင်နေပြီလား။ သူတို့ကို အားနာပေးကြပါ။
ဆိုင်းဘုတ်ကိုင် ဆန္ဒပြရင် ကားနဲ့တိုက်သတ်တယ်၊ သေနတ်နဲ့ပစ်တယ်။ ဆံပင်ဆွဲပြီး ဒရွတ်တိုက်ဖမ်းသွားတယ်။ အေး…. သေနတ်ကိုင်ထားရင် ကယ်ကြပါ၊ ကယ်ကြပါအော်တဲ့ ကိုယ်မေကိုယ်Loe တွေကို ဘာနဲ့ပြောမှ ရမယ် ရှင်းနေပြီ။
အေး…. မိုးကောင်းတုန်းရွာထား။ ငါတို့အလှည့်ကျ မိုးကြိုးကို နှစ်ပင်လိမ်ပြီး ပစ်ချမယ်။ ညှာတာထောက်ထားမှုကို ရဖို့ မစဉ်းစားနဲ့ အောက်တန်းစားများ။
သွေးစက် တစ်စက်ချင်းစီတိုင်းအတွက် ပြန်လည်ပေးဆပ်စေရမယ်။
တစ်နေ့ကျ ရှင်းကြတဲ့အခါ အမိန့်အရပါဆို ကိုယ်မေကိုယ်Loe လိုက်။
Zaw Tuu Tuu says:
2021-12-05 at 11:04 AM
2021-12-05 at 11:31 AM
2021-12-05 at 11:42 AM
Arkar Lin Aung says:
2021-12-05 at 12:04 PM
Sann Myint says:
2021-12-05 at 12:23 PM
2021-12-05 at 12:58 PM
Gi Lay says:
2021-12-05 at 1:10 PM
2021-12-05 at 1:24 PM
စစ္ေခြးေတြ က်ိန္စာတိုက္ရတာ ျမန္ျမန္က်ရႈံးပါေစ
2021-12-05 at 5:20 PM
Thea Nu War says:
ပြည်သူကိုထိရင် စစ်ခွေးမှန်သမျှသေဖို့တာ ပြင်ထားကျ
Ko Aye Min says:
2021-12-05 at 7:30 PM
ကလေးေတွကို သနားလိုက်တာ ဂုဏ်ယူ တယ်ကွာ အသက် ေပးသွားရတဲ့ ကလေးေတွ ေကာင်းရာ ဘုံဘဝ. ကို ေရာက်ပါေစ
ြပည်သူ အားလုံက. ဆုေတာင်းေပးမှာပါ
2021-12-05 at 9:13 PM
အသဲ ေလး says: